LibreOffice သည် MariaDB နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအထောက်အပံ့နှင့်ပေါင်းစည်းမှုရရှိလိမ့်မည် Linux မှ
LibreOffice သည် MariaDB နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအထောက်အပံ့နှင့်ပေါင်းစည်းမှုရှိလိမ့်မည်
အလက်ဇန်းဒါး (ခေါ် KZKG ^ ဂါရာ) | | applications များ, GNU / Linux များ, NOTICIAS
MariaDB ၎င်းသည် MySQL လိုင်စင်ရ GPL လိုင်စင်ရဒေတာဘေ့စ်ဆာဗာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုမိုက်ကယ် "Monty" Widenius (တည်ထောင်သူ) ကထောက်ပံ့သည် က MySQL) နှင့်အခမဲ့ဆော့ဝဲလ် developer များ၏အသိုင်းအဝိုင်း။ အင်ဂျင်ရှိတယ် XtraDBအစားထိုး InnoDB။ ၄ င်းသည် MySQL နှင့်မြင့်မားသောသဟဇာတရှိသည်။ သူ၌တူညီသော command များ၊ interface များ၊ APIs များနှင့်စာကြည့်တိုက်များရှိသောကြောင့်၎င်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ server တစ်ခုအားအခြားတစ်ခုသို့တိုက်ရိုက်ပြောင်းလဲရန်ဖြစ်သည်။
ကောင်းပြီ, အတွက်ထုတ်ဝေဆောင်းပါး၌တည်၏ အဆိုပါစာတမ်းဖောင်ဒေးရှင်းဘလော့ဂ်, သင်ခံစားရလေးစားမှု၏အဆင့်ဖော်ထုတ်ပါ Monty အားဖြင့် LibreOffice, အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုထက်ပိုတဲ့ဖော်ပြချက်တွေကိုဖော်ပြပေးတဲ့နေရာ။
«စီမံကိန်းအတွက်ကျွန်တော်တို့အရမ်းကိုစိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ် LibreOffice... စီမံကိန်းနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလုပ်ဖို့ကျနော်တို့ကိုအကောင်းဆုံးထောက်ခံမှုပေးဖို့ကျူးလွန်နေကြသည် MariaDB LibreOffice ၌တည်၏။ ၎င်းတွင်အခြားအရာများအကြားအသစ်တစ်ခုလည်းပါဝင်သည် LGPL C ယာဉ်မောင်းများ ချိတ်ဆက်ရန် MariaDB o က MySQL နှင့် MariaDB မှမည်သည့်ပြforနာကိုမဆိုအကြီးအကျယ်အကျိုးသက်ရောက်စေသည့်အမှားပြင်ဆင်မှုများကိုပြုလုပ်ပေးပါ LibreOffice«
သင်ပိုမိုကြည့်ရှုနိုင်ပါသည် ဒီ link ကို။ သံသယမရှိဘဲ, ကမ္ဘာကြီးကိုအဘို့ကြီးစွာသောသတင်း ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ် y Office Suite။ တိုးတက်မှု LibreOffice အခြေစိုက်စခန်း ဒီကွင်းခတ်နှင့်အတူ?
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » LibreOffice သည် MariaDB နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအထောက်အပံ့နှင့်ပေါင်းစည်းမှုရှိလိမ့်မည်
MySQL သည် Oracle မှဖြစ်ပြီး၎င်းသည်၎င်း၏အသိုင်းအဝိုင်းဗားရှင်းတွင်ဆက်လက်ပြုပြင်နေဆဲဖြစ်သည်။ ယခင်ကပုံမှန်ဖြစ်လေ့ရှိသောအချို့ extension များကိုဖျက်ပစ်လိုက်ပြီး၎င်းသည်အခြားအချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ငါနားလည်ခဲ့တဲ့အတိုင်းသူတို့ HSQLDB ကိုဒေတာဘေ့စ်တွေအတွက်သုံးတယ်၊ အတူတူပင်သူတို့သည် MySQL jdbc driver ကိုပြုပြင်ရန်သာလိုအပ်သည်။
arturo molina သို့ပြန်သွားရန်
ထို့ကြောင့် Oracle ပါ ၀ င်သော (လက်ရှိ MySQL ပိုင်ရှင်များ) သူတို့သည် Open Office နှင့်အတူတူလုပ်ရန်စဉ်းစားပါကအခြားနည်းလမ်းကိုအကောင်အထည်ဖော်လိမ့်မည်။
အဆိုပါပြproblemနာက, Oracle က MySQL API ကိုမူပိုင်ခွင့်ခွင့်ပြုသောဥပဒေရေးရာကွာဟမှုကိုတွေ့လျှင်အဘယ်သို့ဖြစ်မည်နည်း လွန်ခဲ့သောအချိန်က Oracle သည်ယှဉ်ပြိုင်မှုကိုထိန်းချုပ်ရန်ဤမဟာဗျူဟာကိုလိုက်နာရန်ကြိုးပမ်းနေသည်ဟုဆိုခဲ့သည်
API ကိုနားလည်ရန်အတွက်၎င်းသည် functions များ၊ variable များ၊ အတန်းများစသည်တို့ဖြစ်သည်။ လုံးဝစိတ်ပျက်စရာကောင်းသော်လည်း Oracle မှလာသည်။
ထိုကိစ္စတွင် Monty သည်တရားဝင်ဥပဒေပြproblemsနာများကိုရှောင်ရှားရန် MariaDB API ကိုပြန်လည်ဒီဇိုင်းဆွဲရန်တာဝန်ရှိသည်၊ သို့သော်၎င်းသည် MySQL နှင့်သဟဇာတဖြစ်ခြင်းကိုလည်းရပ်တန့်သွားလိမ့်မည်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်လိမ့်မည်မသေချာပါ။ သို့သော်၎င်းသည် Oracle မှဝယ်ယူလိုက်သော Sun Microsystems အားအခွင့်အရေးအားလုံးကိုပေးအပ်နိုင်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် Oracle သည် MySQL အခွင့်အရေးအားလုံးကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူဖြစ်သည်။ ။
သေချာတာပေါ့, နေသမျှကာလပတ်လုံး Oracle ကယခင်ကရှင်းပြသည်အတိုင်းအရင်းအမြစ်ကုဒ်၏ဝေမျှမူပိုင်ခွင့်မှစီမံခန့်ခွဲအဖြစ်။ သင်မပြုလုပ်နိုင်ပါက MariaDB နှင့်တရား ၀ င်ပြwouldနာမရှိပါ။
အွမ်နှင့်လိုင်စင်ကော? သို့မဟုတ်ပါက GNU GPL လိုင်စင်ရှိပြီး GNU GPL လိုင်စင်အရ၎င်းတို့သည်အလွဲလွဲဖြစ်နေသည်ကိုမေ့နေကြသည်။
GNU အထွေထွေအများပြည်သူလိုင်စင်သို့မဟုတ်၎င်း၏အင်္ဂလိပ်အမည် GNU General Public License သို့မဟုတ်အင်္ဂလိပ် GNU GPL မှအတိုကောက်အားဖြင့်လူသိများသည်၊ အခမဲ့ဆော့ဝဲလ်ဖောင်ဒေးရှင်းက ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သောလိုင်စင်ဖြစ်သည် (ပထမဆုံးမူကွဲ)၊ အခမဲ့ဖြန့်ဖြူး, ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းနှင့် software ကိုအသုံးပြုခြင်း။ ၎င်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာဤလိုင်စင်ပါ ၀ င်သောဆော့ဝဲသည်အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲဖြစ်သည်နှင့်၎င်းလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအသုံးပြုသူများအားကန့်သတ်ထားသည့်သင့်လျော်သည့်ကြိုးပမ်းမှုများမှကာကွယ်ရန်ဖြစ်သည်။
ဆိုလိုတာက Oracle ဟာ GNU GPL လိုင်စင်နဲ့ software တစ်ခုခုကိုမူပိုင်ခွင့်ပြုချင်ရင်ရှင်းပြပါရစေ။ အခမဲ့ဆော့ဝဲဖောင်ဒေးရှင်းကလိုင်စင်ကိုချိုးဖောက်တဲ့အတွက်တရားစွဲဆိုနိုင်ပါတယ်။
Oracle သည် Code ၏ပိုင်ရှင်ဖြစ်ခြင်းနှင့် MySQL ၏အခွင့်အရေးသည်သူလိုချင်သမျှကိုလုပ်နိုင်သည်။ လိုင်စင်ကိုပြောင်းလဲပြီးကုဒ်ကိုပိတ်နိုင်သည်။ စာရေးသူသည်သူတို့၏အစီအစဉ်များကိုလုံးဝပိုင်ရှင်ဖြစ်သောကြောင့် FSF သည်သူတို့အတွက်ဘာမှလုပ်နိုင်သည်မဟုတ်ပါ။
ဤသည်သည် MySQL သည်အခြား GPL သို့မဟုတ် copyleft လိုင်စင်ရသော software ပေါ်တွင်မူတည်နေသမျှကာလပတ်လုံးဖြစ်သည်။
အနာဂတ်ဗားရှင်းလိုင်စင်များကိုသင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်၊ သို့သော်အခမဲ့ပြီးသားဖြစ်သောအရာသည် forks ဖြစ်နိုင်ပြီး GNU GPL လိုင်စင်ဖြင့်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ပြီးတော့သူတို့ကဒီကုဒ်ကိုမူပိုင်ခွင့်ပြုတယ်ဆိုပြီးသူကပြောတယ်၊ သူတို့ကဒေတာဘေ့စ်တွေကိုလည်းမူပိုင်ခွင့်မှတ်ပုံတင်တယ်။ သငျသညျအရာအားလုံးကိုမြင်နိုင်ပါသည်ပေမယ့်။
နောက်တစ်ခုကသူတို့က MySQL ကိုမူပိုင်ခွင့်ရရင်တောင်၊ ငါက Oracle ဟာရုပ်ရှင်ထဲမှာမကောင်းတဲ့လူဖြစ်ချင်တယ်လို့မထင်ဘူး။ (Open Office နဲ့အရင်ကထက်ပိုဆိုးတယ်) ။
အတိအကျဆိုရလျှင်၊ Oracle သည် MySQL လိုင်စင်ကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ယခင်ဗားရှင်းများကိုမသက်ရောက်ပါ၊ ယခင်မူကွဲများကိုသာအကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်သည့်မူပိုင်ခွင့်များဖြစ်သည်။
ဆော့ (ဖ်) ဝဲ (သို့) မည်သည့်နယ်ပယ်တွင်မဆိုမူပိုင်ခွင့်မှတ်ပုံတင်သည်အတော်လေးရှုပ်ထွေးပြီးအမြဲတမ်းနည်းပညာနှောင့်နှေးစေသည်။
Ubuntu Software Center သည် PayPal ကိုထောက်ပံ့လိမ့်မည်